တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေး ပထမ ၈ လအတွင်း ထပ်မံတိုးချဲ့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တရုတ် နိုင်ငံတကာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြပွဲ (CIFTIS) အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုပြခန်းရှိ တရုတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြခန်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးသည် ယခုနှစ် ပထမ ၈ လအတွင်း ယမန်နှစ်ကထက် ၉.၄ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ယွမ် ၃.၂၇ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၄.၂၁ ဘီလီယံခန့်) မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MOC) က အောက်တိုဘာ ၃ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပို့ကုန်အနေဖြင့် ယမန်နှစ်ကထက် ခန့်မှန်းခြေ ယွမ် ၁.၅၅ ထရီလီယံ ရောက်ရှိခဲ့သလို ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသွင်းကုန်အနေဖြင့် ယွမ် ၁.၇၂ ထရီလီယံရှိကာ ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေး ပို့ကုန်များသည် သွင်းကုန်များထက် ပွိုင့် ၂၇.၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးတက်သွားသဖြင့် ယင်းကာလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးလိုငွေတွင် သိသိသာသာလျော့သွားခဲ့သည်။
ပထမ ၈ လအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးလိုငွေမှာ ယွမ် ၁၇၁.၆၇ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူကာလတွင် ရှိခဲ့သော ယွမ် ၅၁၅.၆၂ ဘီလီယံကထက် လျော့နည်းသွားခဲ့ကြောင်း MOC အချက်အလက်မျာအရ သိရသည်။
သို့ရာတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါမူ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ပို့ကုန် ၂၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သွင်းကုန် ၂၅.၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကုန်သွယ်ရေးသည် ၈.၄ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဩဂုတ်လ တစ်လတည်းတွင်ပင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကုန်သွယ်ရေးသည် ယွမ် ၄၆၂.၄၇ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၂၄.၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အသိဉာဏ်အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၌ ကုန်သွယ်ရေးသည် ဇန်နဝါရီ-ဩဂုတ် ကာလအတွင်း ယွမ် ၁.၄၈ ထရီလီယံနီးပါး ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းသည် စုစုပေါင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကုန်သွယ်ရေး၏ ၄၅.၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
အသိဉာဏ်အထူးပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပို့ကုန်သည် လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်အကြာကထက် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာကာ ယွမ် ၈၀၃.၈၂ ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းပို့ကုန်များမှာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ပို့ကုန် စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းသွင်းကုန်များမှာလည်း ၇.၅ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာကာ ယွမ် ၆၇၁.၆ ဘီလီယံရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးမှာမူ ဆက်လက်ကျဆင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း MOC က ဆိုသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိနိုင်ငံများတွင် ပြည်သူများ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွားလာမှုအား ကန့်သတ်ရန် တင်းကြပ်သောဆောင်ရွက်ချက် ဆက်လက်ပြုလုပ်ထားသဖြင့် ဇန်နဝါရီမှ ဩဂုတ်လအထိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးမှာ ယမန်နှစ်ကထက် ၃၀.၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ ယွမ် ၅၀၆.၄၈ ဘီလီယံ ကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်င့ဿည် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် တံခါးဖွင့်ဝါဒ ပိုမိုကျယ်ပြန့်မှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ချက်များစွာ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသလို ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေး တံခါးဖွင့်ဝါဒ ပို၍အဆင့်မြင့်မားစေရေး မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိပြုထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-03 20:22:04|Editor: huaxia
BEIJING, Oct.3(Xinhua) — China’s service trade went up 9.4 percent year on year to top 3.27 trillion yuan (about 504.21 billion U.S. dollars) in the first eight months of the year, the Ministry of Commerce (MOC) said on Sunday.
In August alone, the country’s service trade reached 462.47 billion yuan, up 24.8 percent year on year.
In the January-August period, trade in travel services dropped 30.1 percent year on year to 506.48 billion yuan as countries around the world continued to take strict measures to restrict people’s cross-border movement.